यथास्थितिवादको चङ्गुलले डामाडोल शिक्षा – Chitwan Post
यथास्थितिवादको चङ्गुलले डामाडोल शिक्षा
सबै विधा, पक्ष र क्षेत्रलाई ज्ञान बाँड्ने ‘छाता ज्ञान’ शिक्षा स्वयं अहिले अन्योल र अज्ञानमा छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शिक्षाप्रणाली अझै सर्वत्र आलोचित भइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय आलोचकहरुका आलोचना सार्थक लाग्छन् । जर्ज सन्टाएर्नाको आलोचना छ– ‘विद्यालयको शिक्षामा मात्र भर पर्ने व्यक्ति अशिक्षित हो ।’ अल्बर्ट आइन्स्टाइनको आलोचना छ– ‘स्कुलमा पढेको बिर्सेपछि जे रहन्छ त्यो नै विद्या हो ।’
अमेरिकन शिक्षाविद् तथा समालोचक जोन हल्टले ‘स्कुल इज ब्याड फर चिल्डे«न’ भनेर लेख नै लेखे । पढ्दै नपढी व्यावहारिक ज्ञान हुनु पढाइपछि पनि व्यावहारिक ज्ञान नहुनुभन्दा हजारौँ गुणा राम्रो हो भन्ने व्यङ्ग्यात्मक धारणा प्रहार गर्छन् राबर्ट बी. इन्जरसल । ‘विद्याका साथ जीवनको आदर्श केही उच्च हुँदैन भने पढ्नु व्यर्थ छ’ भन्ने टिप्पणी महात्मा गान्धीको थियो ।
औपचारिक संस्थागत शिक्षाप्रणालीप्रति यति धेरै कडा व्यङ्ग्य र आलोचनाको झटारो महान् विचारक तथा समालोचकहरुले प्रहार गरेका छन् कि औपचारिक शैक्षिक संस्थाहरुको उपलब्धि र विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् । विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरु विद्यालय, कलेज, क्याम्पस र विश्वविद्यालयका चलनचल्तीका शिक्षालाई अर्थहीन साबित गरिदिएका छन् । एकातिर यस्तो प्रहार छ भने अर्कोतिर यही प्रहारहरुको पुष्ट्याइँ हाम्रा शैक्षिक क्षेत्रले गरिरहेको छ । यो आरोप तथा आलोचनाको निरुपणमा जान सकेको छैन । कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महाव्याधिको प्रतिकूलताले तीन महिनायता शैक्षिक जगत् अस्तव्यस्त, डामाडोल र दिशाविहीन, बिनाकम्पासको जहाजजस्तो भ्रममा गुज्रिरहेको छ । सबै क्षेत्रलाई शिक्षा परिपूर्ति गर्ने छाता संकायले भैपरी आउँदा के गर्ने वा कसरी गति लिने भन्ने ज्ञान वा शिक्षा हाम्रो विद्यार्थीमात्रै होइन शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षामन्त्रीलाई नै दिन सकेको रहेनछ ।
एउटा औपचारिकतामात्रै पूरा गर्दै आएको गुणस्तर, व्यावहारिक, ज्ञानार्जन र जीवनोपयोगी शिक्षाको अभावमा खड्किरहने शिक्षाप्रणालीले झन् कोभिड–१९ को निहुँ पाएको छ र प्रभावित भएको छ । अभिभावकत्व आवश्यक पर्ने भनेकै स्थिति असामान्य हुँदा त्यसको सुरक्षित अवतरणका लागि हो । नयाँ सोचविचार, विद्वता र सिर्जनशील बौद्धिकता आवश्यकता पर्ने भनेकै अति कठिन, भयावह र पहुँचबाहिरको अवस्था र परिस्थितिमा हो । तर, राज्यमा शैक्षिक क्षेत्रको अभिभावकत्व दिने शिक्षा मन्त्रालय यथास्थितिवादबाट फड्किन सकेको छैन । शिक्षामन्त्रीमा नवीनता, वैकल्पिक विचार, बौद्धिक जगेडा र भैपरी आउँदाको शैक्षिक कार्ययोजना केही देखिँदैन । हिजोको क्रान्तिकारी पार्टीका शिक्षामन्त्री भन्ने थोरै पनि संकेत देश र दुनियाँले पाउन सकेको छैन । संसदीय व्यवस्थाको इँटा बनाउने चाबीमा उनी पुरानै यथास्थितिवादी आकारको भएका हुन् वा खडेरी र संकटमा के उब्जाउने/के गर्ने ? भन्ने क्षमताहीन हुन् उनी !
दार्शनिक समयअनुसार आफैँ चलिरहने वा सहज ढङ्गले अघि बढिरहने अवस्थाको दास हुनबाहेक व्यक्तिगत समयलाई समाधानमुखी बनाउने लक्षण र हैसियत उनको केही देखिँदैन । शिक्षामन्त्री पुरानो परम्परा धान्ने बनिबनाउ मन्त्रालयको कोटा पूरा गर्ने पात्रबाहेक जनवादी, समाजवादी शिक्षाको योजनाकार र संवाहक बन्ने त छोडौँ बुर्जुवा, पुँजीवादी शिक्षाप्रणालीको तैबिसेक पनि बन्न सकेनन् । परिस्थिति असहज भई क्रमभङ्ग हुँदा एउटा भौतिकरुपमा विकल्पकार र अर्को मानसिक तथा बौद्धिकरुपमा सिर्जनाकार, विचारक अनिवार्य सर्तमा उनलाई कठैबरा भन्नैपर्ने पुष्टि गरेका छन् । उनी परम्परागत फ्रेममा ब्युरोक्र्यासीका दराजहरुमा ढुसी आएकै वक्तव्यहरु पढ्ने र सञ्चारमाध्यमहरुमा बासी श्वास फाल्ने गरेर मन्त्रीय दिनचर्यामा छन् ।
क्रान्तिकारी नेता शिक्षामन्त्री पोखरेलले राजनीतिक ज्यालामात्रै उठाइरहेका छन् वा शिक्षा मन्त्रालय चलाइरहेका छन् ? उनले युद्धकालमा उठाएका शैक्षिक विकल्प र मुद्दाहरु, जनवादी शिक्षामा पुग्ने, समाजवादी शिक्षाका कार्यभारहरु सबै बिर्से वा बिर्साइयो । उनले च्यातेका बुर्जुवा शिक्षापद्धतिप्रति संसदीय मन्त्रालय आरोहणले पश्चात्तापमा परे वा त्यो नै हिजो उनको भ्रम थियो ? अर्थमन्त्रीले बनाइदिएको वा तोकिदिएको अमनासिव बजेटलाई निरीह भएर स्वीकार गर्नु, कर्मचारीले दिएका थोत्रा नीति र योजनाको पोको बोक्दै हिँड्दा शैक्षिक जगत्मा सबैलाई लाज भएको छ । सीधासादा जनताले आश गरेको स्वाभाविक हो, क्रान्तिकारी शिक्षामन्त्रीले केही न केही परिवर्तन ल्याउँछन् र विकृत तथा विसङ्गत शैक्षिक क्षेत्रलाई पक्कै सुधार्छन् । तर, क्रान्तिकारी शिक्षामन्त्री यथास्थितिवादी मन्त्रालयमा आफैँ परिवर्तन भएका छन् । पछाडि फर्केर सारसंग्रहवादको चङ्गुलमा छन् ।
हिजोको ‘जनवादी शिक्षा’का खातिर जलाइएका बुर्जुवा शिक्षा कहाँ गए ? के सत्ता प्राप्तिका लागिमात्रै बुर्जुवा शिक्षाको विरोध थियो ? कि शिक्षामन्त्रीज्यू पहिला आपूm बुर्जुवाकरणले अब्बल र परिष्कृत भइसकेपछि जनताले खोजेको जनवादी शिक्षा लागू हुने हो ? सायद, क्रान्तिकारी शिक्षामन्त्री पोखरेलको दिमागमा सत्ता टिकाउने पुँजीवादी बुर्जुवा शैक्षिक नीतिमात्रै छ कि उनको दिमागमा वर्गविहीन समाज छ ? वर्गीय समाज मेटिइसक्यो ? उनले मन्त्रालय पुग्ने बाटो खनेका जनयुद्ध अवधिभर घोकेर अक्षर–अक्षर कण्ठ सुनाउने गरेका जनवाद, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, भाषीय, जातीय, वर्गीय आदि विभाजनका अवस्था नै हराइसक्यो वा समाधान भइसक्यो ? सायद, अहिले उनको डायरीभरि निजी क्षेत्रका मालिक, शक्ति, सशक्त स्रोत, शैक्षिक ठेकेदार र माफियाहरुका नामहरु खाँदाखाँद छन् । तिनीहरु अहिले शिक्षा सुधारक र शिक्षाविद्मा परिणत भइसके । उनको वर्गसमन्वय निजी मालिकहरुसँग भइसकेको छ । परिणामतः सामुदायिक (सरकारी) शैक्षिक संस्था र संस्थागत (निजी) शैक्षिक संस्थाको फरक देख्न छाडे । सरकारी शैक्षिक संस्था र त्यसमा आबद्धहरुका व्यथा, गाथा, मर्म, वेदना र पीडादायक समस्याहरु भुले । जुन खारेज गर्नुपर्ने हो त्यसैलाई जगाउने र प्रोत्साहन गर्न थाले, तर जुन जगाउनुपर्ने र प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो ती सर्वसाधारणका संस्थाहरुलाई सिध्याउनतर्फ लागे ।
अनिवार्य शिक्षाअन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न नसक्दा पुँजीपति वर्गलाई शैक्षिक प्राथमिकता हुन पुगेको छ । निजी संस्था र सरकारी संस्थाको विषयमा किटानसाथ अझै नीति तयार गर्न सकेका छैनन् । भयावह अवस्थामा जीर्णतातर्फ धकेलिँदै गरेका शैक्षिक क्षेत्रको सफल र सक्षम नेतृत्व लिन सकेका छैनन् । बरू, सामुदायिक विद्यालयलाई निजीको जिम्मा लगाएर आपूm लडेको वर्गलाई उल्टो सिध्याउने बाटो रोजेका छन् । शिक्षामन्त्रीले आधारभूत वर्गीय पहुँचको शैक्षिक विकल्पको नीति तथा कार्यक्रम उब्जाउन सकेका छैनन् । बरू गाउँ, बस्ती, दुर्गम भेग, पहुँचविहीन, सर्वहारा, सुकुमबासी, किसान, मजदुरलाई बिर्सेर पाँच–दस प्रतिशतले खपत गर्न सक्ने सहर र पहुँच, केन्द्रीय अनलाइन शिक्षाको विकल्प निर्लज्ज तेस्र्याउँदै छन् । कि सिंहदरबारभित्रको शिक्षा मन्त्रालयमा सबै एउटै पहुँच र वर्गको हुनेखानेमात्रै देखिन्छ कि वास्तविक संसारप्रति अन्धो बनाउने शक्तिशाली यन्त्र हो मन्त्रालयहरु ? विद्युत्, छापा तथा उपयोगी उपकरणहरु सबैको पहुँचमा छ ? कि मन्त्रालय वा राज्यले व्यवस्था गर्ने हो ? अर्को कुरा, ती साधनहरु रहेछन् भने पनि त्यसमार्फत शिक्षा प्राप्त गर्ने अतिरिक्त रकम कतिले तिर्न सक्छन् ?
कोभिड–१९ ले तहसनहस बनाएको पठनपाठनमात्रै होइन परीक्षा, व्यवस्थापन र सम्बन्धित शिक्षक/कर्मचारीको पेसागत समस्याहरुका चाङ बढ्दैछन् । एसइईको परीक्षा रद्द गरेर आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई प्रमाणीकरण गर्ने भने तापनि त्यो झारा टार्ने ढङ्गको मात्र हुनेछ । योग्य र अयोग्यमा न्यायिक मूल्याङ्कन निश्चित हुने छैन, जो नभएकै सरह हो । कक्षा ११ र १२ को परीक्षाप्रति किंकर्तव्यविमूढ देखिन्छ, ठोस योजनाविहीन देखिन्छ । अर्कोतर्फ कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत तह र १२ सम्मलाई माध्यमिक तह माने तापनि यसको पूर्ण अभ्यासका साथै योजना लागू गरेको देखिँदैन । आजसम्म शैक्षिक पात्रोमा १० सम्म र ११–१२ को संयोजन गरी व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । पाठ्यक्रमलाई १०–१२ संयोजनमा एकाग्रता आउने गरी मिलाउन सफल छैन । विषयहरुको वैज्ञानिक ढङ्गले छनोटमा अब्बल बौद्धिकता देखिँदैन । आजको आवश्यकतानुरुप वैज्ञानिक पाठ्यत्रमकै अभाव छ । अझ भएको पाठ्यत्रममा पनि त्यसको धरातलबाट उछिट्टेर धन कमाउने प्रक्रियाले पूरै शैक्षिक सञ्जाल लागेको छ । ११–१२ अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षकहरुको पेसागत हकहित र सुरक्षा हुने गरी योजना, नीति र कार्यान्वयन केही देखिँदैन । उनीहरुको भविष्यमाथि खेलबाड गरिँदैछ । उनीहरुको सेवासुविधाको वैज्ञानिक नीति बनेको छैन । दरबन्दी सिर्जना गर्ने र स्थायी गर्ने विषयमा कुनै चासो छैन ।
साबिक उच्च माविमा भएका दरबन्दीबाहेक निजी स्रोतमा कार्यरतहरुको अवस्थाप्रति चिन्ता छैन । विद्यालयहरुमा व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापकहरुबाट राजनीतिक पूर्वाग्रह, प्रतिशोध र मनोमानी गरेर शैक्षिक संस्था ध्वस्त बनाएकोप्रति कुनै जिम्मेवार निकायको अनुगमन, सुधार र परिवर्तन गराउने मतलब छैन । निजी स्रोतका शिक्षक÷कर्मचारीको सेवासुविधा व्यवस्था गर्ने जिम्मा व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको हुनाले उनीहरुकै निगाहमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । महिनौँसम्म तलब नपाएका अमानवीय अवस्था हेडमास्टरहरुबाट सिर्जित छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा विद्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म शक्ति र पहुँचको खेल छ । आफ्नो मान्छे हुनेलाई जे पनि भाको छ, नहुने पीडितमै सीमित हुनु परेको छ । पहुँच, नातावाद, कृपावाद र आर्थिक भरमा दरबन्दी व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । साबिकको उच्च माविमा दरबन्दी पाउनुपर्नेले पाएका छैनन्, पाउनै नहुनेले पाएका हुँदा योग्य, दक्ष र अनुभवी शिक्षकलाई अन्यायमात्रै होइन विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिँदै आएका छन् । कैयौँ शैक्षिक संस्थाहरुमा अयोग्य प्रशासक वा हेडमास्टरहरु हुनाले संस्थाको दुर्गति भई सामाजिक अपराध भइरहेको छ । अझै पनि जसले जे पढाए पनि हुनेलगायतका अवस्थाहरु एक्काइसौँ शताब्दीको शैक्षिक पद्धति भएको छ । यसको लेखाजोखा खोइ ? कहिले र कसले गर्ने हो ? झन्झन् शिक्षा नैतिकता, इमानदारिता, मानवता, सीप, ज्ञान र कार्यकुशलता उत्पादन गर्ने नभई पुँजी कमाउने वस्तु उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री बनाइएको छ ।
स्थानीय निकायको मातहतमा भनिएका शैक्षिक संस्थाप्रति स्पष्ट स्थानीय धारणाको अभाव छ । त्यो कसरी, कसले, कहिले गर्ने अनिश्चित छ । कृषिप्रधान देशमा लगभग पाँच प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीलाई कृषि भनेको कुन चराको नाम हो थाहै छैन । शैक्षिक संस्थाहरु दाम वा पुँजीवालाले चलाउँछन् । विचार, ज्ञान र शिक्षाका खानीवालाहरु उनको आदेशमा लुसुक्क काम गर्दै पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । साँच्चै भन्ने हो भने समय परिवर्तन भएको छ, तर विचार पुरानै छ । राणाकालदेखि गणतान्त्रिक लोकतन्त्रसम्म आउँदा केही रुप फरक होला, सार उही यथास्थितिवादी नै छ । यसर्थ, हरेक शैक्षिक संस्थामा कर्मचारी, शिक्षक, प्रशासक, व्यवस्थापन समिति प्रक्रिया, स्थानीय, क्षेत्रीय शिक्षा निकायहरु र मन्त्रालयसम्म व्यापक अपरेसनको जरूरी छ, तर यो कहिले, कोबाट सम्भव होला ? यी शैक्षिक क्षेत्रका विभिन्न निकाय, स्कुलदेखि मन्त्रालयसम्मै यथास्थिति र प्रतिक्रियावादी ढङ्गले आधिकारिकरुपमा बर्बाद र डामाडोल बनाउने हेडमास्टरदेखि शिक्षामन्त्रीसम्मलाई कक्षामा राखेरै वास्तविक ज्ञान र शिक्षा पढाउनु जरूरी छ ।